SS A/B श्रृंखला छोटो पिच ट्रान्समिशन रोलर चेनहरू
स्टेनलेस स्टीलले सामान्यतया जंग, रसायन र गर्मीमा उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान गर्दछ। GL ले स्टेनलेस स्टीलका सुविधाहरूको फाइदा उठाउँदै राम्रो चेनहरू प्रदान गर्दछ। यी चेनहरू उद्योगहरूको विस्तृत दायरामा प्रयोग गरिन्छ, विशेष गरी खाद्य उद्योग र चिकित्सा उद्योग।
सञ्झ्याल पुश गर्नका लागि एसएस एन्टी-साइडबार चेनहरू
सामाग्री: 300,400,600 श्रृंखला स्टेनलेस स्टील
1.सामग्री: 1.SS304, वा जस्ती संग लेपित कार्बन स्टील।
2.Pitch: 8mm, 9.525mm, वा 12.7mm।
3. वस्तु नम्बर: 05BSS, 06BSS, 05B-Galvanized, 06B-Galvanized ect।
4. स्वत: पुशिङ विन्डोजका लागि प्रयोग गरिन्छ।
5. एन्टि-रस्ट कुवा।
SS A, B शृङ्खला छोटो पिच प्रेसिजन रोलर चेनहरू सीधा प्लेटको साथ
एन्टी-संक्षारक चेनले उत्कृष्ट जंग प्रतिरोध प्रदान गर्दछ।
अनुप्रयोगहरूको लागि आदर्श जहाँ शक्ति र जंग प्रतिरोध दुवै आवश्यक छ।
उच्च काम भार संग आवेदन मा प्रयोग गरिन्छ।
एसएस छोटो पिच कन्वेयर चेनहरू एन्टेन्डेड पिनको साथ
1. सामग्री: 304 / 316 / 420 / 410
2. सतह उपचार: ठोस रंग
4. अनुप्रयोग: स्टेनलेस स्टील चेनहरू धेरै उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ, जस्तै मेसिन निर्माण, खाना मेसिनरी, आदि। निम्न र उच्च अवस्थाहरूको लागि पनि उपयुक्त छन्। 5. एट्याचमेन्टहरू जम्मा गर्नको लागि प्रयोग गरिएको एन्टेन्डेड पिन।
SS सर्ट पिच कन्वेयर चेनहरू ISO मानकमा संलग्न सूटको साथ
उत्पादनहरू उच्च गुणस्तरको स्टेनलेस स्टील 304 उत्पादनबाट बनेका छन्। परिशुद्धता प्रविधिद्वारा प्लेटहरू मुक्का र निचोड बोरहरू छन्। पिन, बुश, रोलर उच्च दक्षता स्वचालित उपकरण र स्वचालित पीस उपकरण, सतह ब्लास्टिङ प्रक्रिया आदि द्वारा मिसिन गरिन्छ। आन्तरिक प्वाल स्थिति द्वारा सटीक संयोजन, सम्पूर्ण चेन को कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न दबाब द्वारा riveted स्पिन।
ISO मानक एसएस डबल पिच कन्वेयर चेन
हामीसँग ANSI देखि ISO र DIN मापदण्डहरू, सामग्री, कन्फिगरेसनहरू, र गुणस्तर स्तरहरू सम्मका उच्च-गुणस्तरको डबल पिच रोलर चेनहरूको पूर्ण लाइन छ। हामी यी चेनहरूलाई 10ft बक्सहरूमा, 50ft रिलहरू, र 100ft रिलहरूमा केही साइजहरूमा स्टक गर्छौं, हामी अनुरोधमा लम्बाइ स्ट्र्यान्डहरूमा अनुकूलन कट पनि आपूर्ति गर्न सक्छौं। कार्बन स्टील सामग्री उपलब्ध छ।
एसएस कन्वेयर बुशिङ चेन, र एट्याचमेन्टहरू सहित
स्टेनलेस स्टील कन्वेयर चेन धुने-डाउन वातावरणका साथै खाना-ग्रेड, उच्च तापक्रम, र घर्षण अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यो सामान्यतया 304-ग्रेडको स्टेनलेस स्टीलमा आपूर्ति गरिन्छ किनभने यसको राम्रो मेकानिकल गुणहरू छन्, तर 316-ग्रेड अनुरोधमा पनि उपलब्ध छ। हामी ANSI प्रमाणित, ISO प्रमाणित, र DIN प्रमाणित स्टेनलेस स्टील कन्वेयर चेन स्टक गर्छौं। साथै, हामी स्टेनलेस स्टील कन्वेयर चेन एट्याचमेन्ट र स्टेनलेस स्टील स्प्रोकेटहरूको पूर्ण लाइन स्टक गर्छौं।
एसएस आरएफ प्रकार कन्वेयर चेन, र एट्याचमेन्टहरू सहित
एसएस आरएफ प्रकार कन्वेयर चेनउत्पादनमा जंग प्रतिरोध, उच्च र कम तापमान प्रतिरोध, सफाई र यस्तै विशेषताहरू छन्। यो धेरै अवसरहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै तेर्सो यातायात, झुकाव यातायात, ठाडो यातायात र यति। यो खाद्य मेसिनरी, प्याकेजिङ्ग मेसिनरी र यति को स्वचालित उत्पादन लाइनहरु को लागी उपयुक्त छ।
एसएस एम सीरीज कन्वेयर चेन, र एट्याचमेन्टहरू सहित
M श्रृंखला सबैभन्दा विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुने युरोपेली मानक भएको छ। यो ISO चेन SSM20 देखि SSM450 सम्म उपलब्ध छ। यसैले यस श्रृंखलाले सामना गर्ने अधिकांश मेकानिकल ह्यान्डलिंग आवश्यकताहरू पूरा गर्नेछ। यो चेन, यद्यपि DIN 8165 सँग तुलना गर्न सकिन्छ, अन्य सटीक रोलर चेन मानकहरूसँग आदानप्रदान योग्य छैन। मानक, ठूला वा फ्ल्याङ्ग रोलरहरूसँग उपलब्ध छ यो सामान्यतया यसको झाडी फारममा विशेष गरी काठको ढुवानीमा प्रयोग गरिन्छ। कार्बन स्टील सामग्री उपलब्ध छ।
खोक्रो पिन संग SS MC श्रृंखला कन्वेयर चेन
होलो पिन कन्भेयर चेनहरू (MC श्रृंखला) सबैभन्दा सामान्य प्रकारको चेन ड्राइभ हो जुन घरेलु, औद्योगिक र कृषि मेसिनरीहरूको विस्तृत दायराको लागि मेकानिकल पावर चलाउन प्रयोग गरिन्छ, जसमा कन्वेयरहरू, तार रेखाचित्र मेसिनहरू र पाइप ड्राइङ् मेसिनहरू समावेश छन्। उत्पादनहरू उच्च गुणस्तरको स्टेनलेसले बनेका छन्। स्टील। स्टिल प्लेटहरू सटीक टेक्नोलोजीको साथ प्वालहरूमा मुक्का र निचोड गरिन्छ। उच्च दक्षता स्वचालित उपकरण र स्वचालित पीस उपकरण द्वारा प्रशोधन पछि,। विधानसभा शुद्धता भित्री प्वाल र रोटरी riveting दबाव को स्थिति द्वारा ग्यारेन्टी छ।
विभिन्न प्रकारका रोलर र एट्याचमेन्टहरू सहित SS FV श्रृंखला कन्वेयर चेनहरू
FV श्रृंखला कन्वेयर चेनहरू DIN मानक पूरा गर्छन्, मुख्यतया FV प्रकार कन्वेयर चेन, FVT प्रकार कन्वेयर चेन र FVC प्रकार खोक्रो पिन शाफ्ट कन्वेयर चेन सहित। युरोपेली बजारहरूमा उत्पादनहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, सामान्य ढुवानीका लागि सामग्रीहरू र मेकानाइज्ड कन्भेइङ उपकरणहरू। कार्बन स्टील सामग्री उपलब्ध छ।
SS/POM/PA6 मा रोलरहरूसँग SS FVT शृङ्खला कन्वेयर चेनहरू
हामी FVT (DIN 8165), MT (DIN 8167) en BST अनुसार गहिरो लिङ्क कन्वेयर चेनहरू प्रस्ताव गर्छौं। यी कन्वेयर चेनहरू एट्याचमेन्टहरू र विभिन्न प्रकारका रोलरहरू सहित वा बिना डिजाइनहरूको विस्तृत विविधतामा उपलब्ध छन्।